R & D လျှပ်စစ် Dept. - ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Group မှ
မူလစာမျက်နှာ / R & D Center က/ တီဗီ R & D Dept./ R & D လျှပ်စစ် Dept.
လျှပ်စစ်ကလဝက။ ဟာ့ဒ်ဝဲသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်တညျဆောကျတပြင်လုံးကိုကုမ္ပဏီ၏ R & D စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, အဓိကအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုဘုတ်အဖွဲ့အတွင်းပိုင်းမော်နီတာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ဟာ့ဒ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ကလဝကတင်းကြပ်စွာ panel က display ကို terminal ကိုနည်းပညာအသစ်အောက်ပါအတိုင်း, အဓိကအားဖြင့်အဓိကဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်နီတာဟာ့ဒ်ဝဲစောင့်ကြည့်, backlit စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်းဘုတ်အဖွဲ့ LED, LCD ကို TV ကအဓိကဘုတ်အဖွဲ့, ပါဝါဘုတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အဓိကထား။ မြေတပြင်လုံးဌာနကို TV ကဟာ့ဒ်ဝဲသုတေသနအဖွဲ့, ပါဝါဒီဇိုင်းအဖွဲ့ DQA စမ်းသပ်အသင်းနှင့်စံအဖွဲ့သည်သို့ခွဲခြားထားတယ်။
panel က display ကိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလယ်ပြင်၌တရုတ်အတွက်အစောဆုံးကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းပညာဆည်းပူးနှင့်တက်ကြွစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများညှိ။ ကျွန်တော်တို့သည်ယင်းကဲ့သို့ဒါအပေါ် Mstar Mstar, Realtek, MPS, MTK, ST, TI, NXP နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးရေးပူးတွဲအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် Audio / Video နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး, ပါဝါနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်အများအပြားကျော်ကြား IC ဒီဇိုင်းကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ဝယ်လိုအားလှုပ်ရှားမှုဘုတ်အဖွဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လျင်မြန်စွာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် PDM စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းပေါ်အခြေခံပြီးဦးဆောင်သည့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလမ်းကြောင်းသစ်များအတွက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်အားဌာနခွဲနည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့သည်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကာလကိုအတိုကောက်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ငါတို့လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းစည်းစမ်းသပ်ခြင်းအခန်းထဲမှာတည်ဆောက်သတ်မှတ်ချက်အရ ORT အိုမင်းဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်သံကိုထောက်လှမ်းတိတ်ဆိတ်ခန်း, etc, Analog စရုပ်မြင်သံကြား signal ကိုမီးစက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်အပူစျေးမှာစမ်းသပ်သေတ္တာများ ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီ signal ကိုမီးစက်, HDMI high-definition signal ကိုမီးစက်, အဖြူရောင်ဟန်ချက်ညှိနှိုင်းမှုတူရိယာ, LCD ကိုအရောင် Analyzer, ကွန်ယက်ကိုစမ်းသပ်ကိရိယာများ, ရုပ်မြင်သံကြားအသံဖမ်းဘက်ပေါင်းစုံတိုင်းတာခြင်းစနစ်များ, အသံစမ်းသပ် system ကိုပါဝါ tester မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ် box ကို RBI အပူချိန်မီတာ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု tester , ရောင်စဉ် Analyzer, လျှပ်စီးမြင့်တက် tester, အထူးပြုစမ်းသပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ငြိမ် tester ရာပေါင်းများစွာအစုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပုဂ္ဂိုလ်များပြားချပ်ချပ် panel ကို TV က display ကိုနည်းပညာ၏လယ်ပြင်တွင်ဆန်းသစ်သောသုတေသနတီထွင်မှု, utility ကိုမော်ဒယ်များနှင့်နည်းပညာဖြန့်ချိဖို့သူတို့ကိုအားပေး, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသစ်များကိုစိတ်ကူးများစေ R & D ကိုအားပေးဖို့, သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကိုအရေးပါမှုကြာပါသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာမူပိုင်ခွင့်, ထိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Analog စနှင့် ATSC ဖုံးအုပ်ထုတ်ကုန်, DVB-T A / C, DVB-T2, ISDB-T က, DTMB ဒီဂျစ်တယ်တီဗီစျေးကွက်ရှိသည်။